Izixhobo - Umbutho wamaZiko aBhalayo eHlabathi
Ukufundelwa ubulungisa bobuhlanga
I-Annotated Bibliografi evela kwi-IWCA SIG kwi-Antiracism Activism (2014)
IiJenali zeZiko lokuBhala
Ijenali yeZiko lokuBhala: Ijenali ye-IWCA. Rhuma kwifayile ye- Ubulungu bePortal.
Uphengululo loontanga: Kwi-Intanethi, kwimithombo evulekileyo yemithombo yeendaba ye-IWCA.
Elinye iZiko lokuBhala iScholarship, uPhando, iiBibliographies
Ukuphumelela IWCA amanqaku kwaye iincwadi
Ukuqhubekeka ngokuqhubekayo kwibhayibhile yeencwadi zeZiko lokuBhala
The Amaziko okubhala iProjekthi yoPhando, eyavela kwiDyunivesithi yaseLouisville ngo-2000 kwaye yafuduselwa kwiDyunivesithi yase-Arkansas iLittle Rock kwiminyaka eliqela kamva, ifuna ukubhala ngembali yamaziko okubhala eMelika nakwamanye amazwe. Iiprojekthi zibandakanya iimbali zomlomo zabasebenzi beziko lokubhala abanempembelelo, ugcino lwezinto ezibalulekileyo ezinxulumene nokubhala, kunye nophando lokulinganisa ulwazi olufanelekileyo kulwalathiso nasekusebenzeni kumaziko okubhala. Apha. Uqhagamshelwano UAllison Holland ngolwazi malunga neWCRP okanye UHarry Denny malunga nalo Uphando lwe-WCRP.
Uluhlu lweWCENTERI-WCENTER luluhlu lweposi lwabasebenzi beZiko lokuBhala kwihlabathi liphela. Ukubhalisela iWCENTER, nxibelelana no-Elizabeth Bowen elizabeth.bowen@ttu.edu. Ukujonga indawo yogcino, ungaya kwi http://lyris.ttu.edu/read/?forum=wcenter. Ukuba ungathanda ukuthumela umyalezo kuluhlu, vele uthumele imeyile yakho ngokufanelekileyo: wcenter@lyris.ttu.edu. Nceda uqaphele: i-WCENTER ayingombutho osemthethweni we-IWCA. IWCA ayimodareyithi okanye ilawule iseva ehlala kuyo.
Uluhlu lweSSWC: I-SSWC luluhlu lokuposa lwe yesibini Abalawuli bamaziko okubhala ezikolweni. Ukubhalisela i-SSWC-L thumela i-imeyile ku LISTERV@LISTS.PSU.EDU kunye "Rhumela i-SSWC-L ingama lakho" emzimbeni womyalezo.
Intsebenziswano ye-IWCA @ CCCCs
INkomfa yeSizwe yokuFundisa koontanga ngokuBhala (NCPTW)